कम लागत एसईओ सेवाहरू साना व्यवसाय सुरक्षितका लागि हुन्?
जबकि "कम मूल्य SEO = खतरा" को एक वास्तविक बयान भन्दा एक मिथक हो, एक सस्तो मूल्य को लागि बुरा एसईओ को मामलाहरु असामान्य छैन. साना व्यवसायहरू विशेष गरी यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दछ किनकी धेरै कम लागत एसईओ एजेन्सीहरूलाई सामान्यतया उनीहरूलाई लक्षित गर्दछ र स्थानीय उद्यमहरू र उनीहरूका थुप्रै प्रस्तावहरू ई-भण्डारहरू र साइटहरूको लागि धेरै आकर्षक लाग्दछन् जुन अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नगरीमा प्रचार गर्ने प्रयास गर्छन्।.
यी निम्न मूल्य पछ्याउँदै एसईओ प्रस्तावहरूले अन्धो रूपमा यी नतिजाहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ:
ब्ल्याक टोपी एसईओ. धेरै एसईओ एजेन्सीहरू जसले कुञ्जी शब्दहरू स्प्यामिंग, लुकाइएका पाठहरू, ढोकाहरू र अन्य खराब अभ्यासहरूसँग Google दिशानिर्देशहरू सजग रूपमा सामान्यतया तिनीहरूको सेवाहरूको लागि कम मूल्यहरू प्रदान गर्छन्।. यो उनको जाल को भाग हो: उनीहरु को आकर्षक लागत मा एक मजबूत बढावा को वादा गर्छन र प्रतिज्ञा को बढावा दिन को लागि. यस्तो नीतिले उनीहरूलाई धेरै अनुभवहीन साइट मालिकों ल्याउँछ जसले बेवास्ता गर्दछ कि ब्ल्याक ह्याट एसईओ मार्फत रेटिङ वृद्धि अस्थायी छ र ठूलो गिरावट अपरिहार्य छ।.
ठहराव. कहिलेकाहीँ, तपाईले सानो व्यवसाय वा ठूला कम्पनीहरूको लागि कम लागत एसईओ सेवाहरू फेला पार्छ जुन ब्ल्याक ह्याट होइनन्. बरु, तिनीहरू पदोन्नति विकल्पहरूमा सीमित छन् र सबै चरणहरू अपरिचित टीम द्वारा प्रदर्शन गरिन्छ. यसैले, एक निश्चित बिन्दु प्राप्त गरे पछि, तपाईंको अभियान त्यहाँ बस फ्रीज हुन्छ किनकी तपाईंको एसईओ क्युरेटरहरू थाहा छैन जहाँ यहाँ बाट जान्छन्. साथै तिनीहरू केवल अग्रिम साधन हुन सक्दैन, जस्तै कम मूल्य = कम वेतन.
सामाग्री को कम गुणवत्ता. सामग्री कीवर्ड अनुकूलन, लिङ्क इमारत र वृद्धि दर बढाउने एक प्रमुख भाग खेल्दछ. यद्यपि यदि तपाईंको सामग्री सान्दर्भिक, अनन्य वा रोचक छैन, पढ्नका लागी कुञ्जी शब्दहरू र लिङ्कहरू प्रविष्ट गर्नाले तपाईंको दर्जा बढाउन सक्दैन. दुर्भाग्यवश, कम लागत एसईओ सेवाहरूमा कपीराइटिंग को लागी व्यापार को लागी कम से कम अनुसन्धान र सम्पादन को लागी यस्तो दल को रूप मा सामान्यतः अनुभवी लेखकों को कमी छ. यसकारण, तपाइँले भुक्तानी गर्नुभएका सामग्रीबाट उत्कृष्ट परिणामहरूको अपेक्षा नगर्नुहोस् 10 को लागि.
यस जानकारी को मतलब छैन कि तपाइँ कुनै पनि लागत मा "किफायती" र "सस्तो" एसईओ देखि बचने चाहिए. तपाईले के गर्नुपर्छ भने, कम लागत SEO सेवाहरू खोज्दा तपाईंको सानो व्यवसायको लागी खतराको बारेमा अव्यवस्थित हुनुपर्दछ. सस्ती सँधै सस्तो बराबर छैन, र ध्वनि मूल्य निर्धारण नीति घोटालाको पर्याय होइन. त्यहाँ त्यहाँका एजेन्सीहरू छन्, जसले एसईओ फर्महरूको प्रतिष्ठालाई बर्बाद गर्छ, हामी तपाईंलाई भेदभाव पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछौं.
सस्ता बनाइने सस्ती: के फरक छ?
यो राम्रो एसईओ को कम गुणवत्ता वाला एजेन्सी को असंख्य मूल्य को लागी सम्भव छ. तपाईंलाई एसईओ गुरु हुनु आवश्यक छैन वा हातमा झूटे डिटेक्टर छ. एकदम पूर्ण अनुसन्धान पर्याप्त भन्दा बढी छ.
एसईओ एजेन्सीहरूको सूची रचना गर्नुहोस्, जुन साना अनलाइन अनलाइन व्यवसायहरूको लागि कम मूल्यको व्यावसायिक सहायता प्रदान गर्दछ;
उनीहरूको मूल्य र मूल्यको प्रस्ताव उनीहरूको मूल्यको तुलना गर्नुहोस्;
उनीहरूलाई आफैले प्रवर्द्ध गर्ने तरिकामा हेरौं: यदि तिनीहरूले छिटो नतिजा र अचम्म लाग्ने वादा गर्दछन् भने तिनीहरूका प्रतिज्ञाहरू केहीको लागि राम्रो हुने गर्दछन्;
हेर्नुहोस् कि सबै एजेन्सीहरू पोर्टफोलियो छ कि छैन. बिना कुनै कम्पनीहरू पार गर्नुहोस्. त्यसपछि परियोजनाहरू अध्ययन गर्नुहोस् फर्महरूले आफ्नो विशेषज्ञता निर्धारण गर्न काम गरे. तपाईं साइटहरूमा पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ एजेन्सीहरूले SEO हेर्नका लागि उनीहरूको प्रतियोगिहरूको विरूद्ध कति पैसा कमाउने.
प्रत्येक एजेन्सीको विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उनीहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन्, चाहे तिनीहरू विश्वास र मित्रतापूर्ण वा गोपनीय, अस्पष्ट छन् र तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू खरीद गर्न छिटो. उनीहरूको प्रश्नहरू सोध्नुहोस् जुन Google दिशानिर्देशहरू, पदोन्नति र एसईओ प्रविधिहरूको आफ्नो ज्ञान प्रकट हुनेछ. के तपाईं आफ्नो साइट को बारे मा अधिक सोध्नु भन्दा बिना परिणाम प्रतिज्ञा गर्न हो? के उनीहरूले मात्रा र छोटो-मादामा जोड दिए?
पृष्ठभूमिको अध्ययन र कम्पनीको जैव अध्ययन गर्नुहोस्. जब एजेन्सीहरू5वर्षका अनुभवहरू योग्य छन्, ती 1-3 वर्षका फर्महरू टाढा छिर्न नसक्नुहोस्. धेरै युवा कम्पनीहरू 10 वर्षको लागि व्यापारमा भएका विशेषज्ञहरू द्वारा स्थापित गरिएको छ. यो मुद्दा पनि कम्पनीको जैव र ब्लगमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ.
समीक्षाहरु हेर्नुहोस्. सामान्यतया, सबै विश्वसनीय कम्पनीले उनीहरूको साइटमा आफ्नो समीक्षाहरू राख्दछन् वा समीक्षा वेबसाइटहरू खातामा राख्न अनुमति दिन्छ र यसलाई प्रतिक्रिया दिन्छ।. यदि एक एजेन्सी, जुन सानो मूल्य अनलाइन एसोसिएशन को लागि एसईओ सेवाहरु को पेशकश संग टिप्पणिहरु संग बातचीत देखि बचछन, यो सम्भव छैन संग सम्झौता सुरक्षित.
आजकल, एसईओ कम्पनीहरु ठूलो प्रकारमा आउँछन् र तिनीहरूको मूल्य निर्धारण नीति फरक फरक हुन्छ. त्यसोभए, एसईओ टोलीहरूबाट तुरुन्तै फर्कन सट्टा, जो सस्तो समाधानहरू प्रदान गर्दछ, तपाईंको अनुसन्धान गर्नुहोस् र वास्तविक मूल्यको मूल्य र गुणस्तर हेर्नुहोस्। Source . अन्यअन्तर्गत तपाईंले केही अचम्मका सौदाहरू हराउनु भएको छ!